ဘယ်သူလေးလဲဆိုတာ ပြောပြ ဘူး သိချင်ရင် ဝင်ဖတ်! နာမည်ကြီး ထိုက်ပါပေတယ် – Shwe Yoe
ဘယ်သူလေးလဲဆိုတာ ပြောပြ ဘူး သိချင်ရင် ဝင်ဖတ်! နာမည်ကြီး ထိုက်ပါပေတယ်
ပိုစ့်ဆန်းဆန်းလေးတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်တတ်တဲ့ မော်ဒယ်၊မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းကတော့ သူမရဲ့ ခပ်ဆန်းဆန်း ဓါတ်ပုံလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ကျော်ကြားလာသူလေးတစ်ယောက်ပါ။ပရိသတ်ကြီးရေ အသားအရည် ဖြူဖွေးဝင်းမွတ်ပြီး မြင်သူငေးရတဲ့အလှ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဖက်ရှင်မော်ဒယ်လ် နွယ်နွယ်ထွန်းကတော့ ပုရိသပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံခြင်းကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ သူလေးပါနော်။
နွယ်နွယ်ထွန်းက ချစ်စရာကောင်းပြီး အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာလေးအပြင် ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်း တဲ့ တောင်းတင်းလှပပြီး အချိုးအစားပြေပြစ်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေသာမကပဲ မိန်းကလေး အချင်းချင်းကပါ အားကျနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်…….။အမိုက်စားဖက်၇ှင်လေးနဲ့ လန်းလွန်းတဲ့ အ​ ကြမ်း စားပိုစ့်တွေပေးပြီး ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် အမိုက်စားပုံတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သူမကတော့ ဒီကနေ့မှာ သူမရဲ့ ကျစ်လစ်တဲ့ ဘော်ဒီအလှနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အကြည့်တွေကို ဖမ်းစားလိုက်ပြန်ပါပြီ။ပရိသတ်တွေအတွက် နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အလှဓါတ်ပုံလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပုံလေးတွေတိုင်းက ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတာကြောင့် ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုပြီး ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်……..။
Source: Nwe Nwe Tun Fb Acc
့ ပင်ကိုယ် အလှတရားတွေကို ချပြလိုက်တဲ့ နွယ်ဒါလီထွန်း